Cilad ku timid diyaarad ay la socdeen masuuliyiin ka tirsan HirShabelle | Xaysimo
Home War Cilad ku timid diyaarad ay la socdeen masuuliyiin ka tirsan HirShabelle
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa cilad ku timid diyaarad ay la socdeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka HirShabelle oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka.
Diyaaradda oo ka soo amba-baxday magaalada Jowhar ayaa cilad dhinaca matoorka ah ay ku qabsatay hawada, waxaana ay sidday wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka HirShabelle, Mudane Cabdixakiin Luqmaan Muxumed, islamarkaana uu ka mid ah wasiirka amniga maamulkaasi Maxamed C/raxmaan Khayre.
Wararka ayaa sheegaya in diyaaradda uu si deg-deg ah duuliyaha uga soo dajiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey jiritaanka warkan, iyaga oo shaaciyey in cilada ay ku timid ka mid ka mid ah matoorada diyaaradda.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in mas’uuliyiinta HirShabelle ay diyaarad kale ka qaateen garoonka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Wafdigan ayaa ku socday Beledweyne, si ay uga qeyb uga noqdaan xallinta xiisada ka taagan gudaha magaaladaasi.
Illaa iyo hadda ma jiro wax faah faahin ah oo laga bixiyey shilkaasi, balse ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay cilaada ku timid diyaaraddaasi.
Madaxda dowlad goboleedka HirShabelle ayaa inta badan isticmaala diyaarado marka ay tagayaan degmooyinka gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, maadaama ay inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab go’doomiyeen deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi.